Maitiro ekuziva kana yako iPhone iri nyowani, yakagadziridzwa, yakasarudzika kana kutsiva | IPhone nhau
Chokwadi, kana iwe ukaenda kune Apple Chitoro uye wotenga iyo iPhone, iwe hauna mubvunzo kuti icho chitsva chiteshi. Zvakare, kana iwe uri mumwe wevaya vanowanzoitwa nemhando dzakadzoreredzwayakagadziridzwa- usava nekusahadzika chero. Zvisinei, Ko kana tikataura nezve musika wechipiri-ruoko? Hazvingave zvirinani kuve nechokwadi chekuti iyo iPhone yaunofunga kutenga inobva kupi?
Sezvatakadzidza, pane mana marudzi ematare iwe aunowana pane iyo iPhone: nyowani, yakadzoreredzwa, kutsiva kana yakagadzirirwa. Chokwadi, pakutanga kuona, zvinonetsa kuti iwe uzive kuti ndeipi mhando ye iPhone yatiri kutaura nezvayo. Zvino, kana chiri chechipiri-ruoko kutenga, zvirokwazvo iwe unoda kuziva kana iyo modhi yapfuura nemaoko mazhinji. Uye kubva kuActualidad iPhone isu tichaita kuti zvive nyore kwauri kuti uzive kwayakatangira.
Kufunga kwekutenga yakagadziridzwa iPhone? Mune ino link iwe unowana iwo mamodheru eApple akagadzirwazve uye kuti dzinotengeswa nevimbiso yekuti dzinoshanda nemazvo. Uye zvakare, kana iwe uchichigamuchira uye usingaifarire, unogona kuchidzorera pasina chisungo uye nekureruka kweAmazon, pasina kutora chero njodzi.
Sezvavanotidzidzisa kubva kuOSXDaily, nevamwe nhanho dziri nyore kuburikidza nemenu yekumisikidza isu tinogona kuziva kana yako iPhone iri nyowani kana yemapoka matatu anotevera. Kuti tizive, isu tichafanirwa kuenda ku "Zvirongwa", tinya pa "General" uye isu tichafanirwa kupinda mu "Ruzivo" menyu. Muchikamu chino tichava neruzivo rwese nezve iyo terminal: iyo vhezheni yeIOS yatiri kushandisa, iyo yekuchengetera yatinayo; mapikicha mangani atakachengeta; mushandisi upi watinoshandisa; serial nhamba uye chinotinakidza chikamu chinoratidza "Muenzaniso".
Iwe uchaona kuti mupfungwa iyi, mavara anounzwa kwatiri anotungamirwa netsamba. Izvi zvinogona kuva: "M", "F", "P" kana "N". Pazasi isu tinotsanangura izvo chimwe nechimwe chazvo chinoreva:
«F»: chichava a yakadzorerwa unit; Apple yakaidzorera uye ndokuitengesa nemutengo uri nani nekuti mune ino ruoko rwechipiri
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuudza kana yako iPhone iri nyowani, yakagadziridzwa, tsika, kana kutsiva
Carlos Luengo Heras akadaro
Yangu ndeimwe yeavo vanoshanduka mune genius bar nekuda kwedambudziko neiyo yekutanga iPhone uye inoti N.
Pindura kuna Carlos Luengo Heras
Ndatenda nemushumo iwoyo ini ndainyanya kuda kuziva kana yangu iPhone iri nyowani oh yanyatsoshandiswa ..
Uye kana ichiti A ??
Ndichida kuziva, ini ndanga ndisingazive izvi, chokwadi ndechekuti ndinoona zvichinakidza kuti ndinokupa iyi ruzivo.
Javier Ruiz akadaro
Yangu inotiwo N. Uye ndakafunga kuti vakanga vandipa zvakare nekuti yangu yaive. Ndingabvunze here?
Pindura Javier Ruiz Murcia
Kwaziwai! Yaive sei ne iphone yako iyo modhi yakatanga ne tsamba N ???
Mhoro zvakanaka saka kana N ikaonekwa pamuenzaniso zvinoreva here kuti haisi nyowani kana inogona kunge iri nyowani kunyangwe iri yekutsiva unit?
Kufanana nevamwe vandinoona kwakatenderedza pano, ini ndaive nedambudziko neyangu yekutanga uye iyo SAT yakachinja kuita iyo yandinayo izvozvi, yaive nyowani, asi nhamba yayo yemhando inotanga na "N". Inogona kugadziriswa, asi ini handifunge kudaro. Ivo vakatondipa iyo "gadziriso" invoice pandakaisimudza sekunge ndaraira nhare nyowani (uye nemutengo wayo wepakutanga wakatarwa, unova mutengo mutsva) asi uine dhisikaundi zvekuti ndakabhadhara zero. Ini ndinofungidzira ipapo kuti "N" hazvireve chete kuti chikwereti pavanogadzirisa chako, asi zvakare kuti ndivo vanotsiva kana pachinzvimbo chekugadzirisa chako vanokupa imwe unit.
Parizvino ndine chinotsiva 6+ neangu 8+ pane iyo sat uye inoti "M", handizive kuti ruzivo irworwo rwakavimbika sei.
zvimwe chete akadaro
murume, chitoro chinogona kukupa iwe chitubu chitsva kana chichida uye chisina "kukweretesa" chiripo ...
Ruzivo ruri muchinyorwa chino ndere CHOKWADI, uye iwe wakapotsa wakanganisa kutengesa kwei iphone x mazuva mashoma apfuura.
Ndakatenga iphone yangu x zuva raibuda rinenge gore rakapfuura uye nhamba inotanga naF.
Paunenge uchiverenga chinyorwa chako, fonera apple apple service, iyo mushure mekutaurirana kwakawanda, zvakanyatsoramba zvinotaurwa neichi peji. Vakati hazvigoneke kuve neyakadzokororwa pazuva rekutanga rekutengesa kuruzhinji, uye rwechipiri mubhokisi rinoisa iyo serial nhamba uye zvikamu zvakadzorerwa hazviunzwe mubhokisi reApple nezvose zvishongedzo, asi bhokisi risina mabheji (izvo zvakaitika kwandiri ine iphone 5 uye newadhi yemukadzi wangu).
Uye zvakare kuti ndakatenga XS MAX musi mumwe chete iwoyo payakatengesa uye nhamba yayo INOTANGA TB NAF.
Kana iwe uchivavarira kuve referensi peji mune kubvunza nezve iphone, iwe unofanirwa zvirinani kusimbisa ruzivo rwako. Iri izano. dzimwe nguva vashandi vanokuvadzwa netsaona uye une basa sevazivisi.
Pindura Javier Ruiz
Ndine urombo kukuudza Javier, kuti kune akawanda mapeji akavakirwa pamatsamba aya kuti atange mabviro, kutaura chokwadi ndine iPad kubva makore matatu apfuura, iPhone neApple Watch, uye zvese zvinotanga naM. Pamwe macode akachinja kana ini handizvitsanangure. Kune rimwe divi, zvingave zvisingawanzoitika kuti michina mitsva yakadaro iuye netsamba iyo, kunze kwekunge ivo vachinja fomati. Ndiri kumirira shanduko inogona kuitika yewatch series 3, uye kana vakaichinja, ini ndichazviona mumunhu wekutanga. Shuwiro yakanakisa.
Izvo zvakafanana zvakaitika kwandiri sekuna Javier.
Ndine iPhone XS yakatengwa nguva pfupi ndabuda, muMM, yakasimbiswa, uye nhamba yayo ye serial inotanga naF.
Ini zvakare ndakatenga iyo iPhone 8 Plus munaJune, muMM, yakasimbiswa, uye zvakare inotanga naF.
Vakanditengesera nharembozha mbiri dzakadzorerwa senharembozha nyowani? Kana kuti Apple inogovera semidziyo mitsva yakagadziridzwa here?
Ichokwadi ndechekuti izvozvi vandisiya ndisina kuravira mumuromo mangu.
Nekuremekedza kwakakodzera, vanababa vanonzwa kuvhiringidzika / kubiridzirwa; iwe unofanirwa kuziva kuti makambani (vamwe veApple vanogovera mune dzimwe nyika, uye mamwe mabrand) anoshandisa zvisizvo ruzivo rwakadaro kuti vatenge zvisirizvo zvigadzirwa.
WhatsApp inouya kuCarPlay pamberi peApple Watch